अमेरिका र तालिबानको वार्ता सकियो, के-के भयो प्रगति ? - २८ श्रावण २०७६, NepalTimes
अमेरिका र तालिबानको वार्ता सकियो, के-के भयो प्रगति ?
साउन २८ , काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानबीचको वार्ता गए राति सकिएको छ । यी दुई पक्षबीचको यो आठौं चरणको वार्ता भएको थियो ।
तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद्दीनले कतारको राजधानी दोहामा भएको सो वार्ता गए राति सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अमेरिकासँगको आठौँ चरणको वार्ता दोहामा गए राति सम्पन्न भएको छ र यस वार्ता सकारात्मक भएको छ ।
उनको यो ट्वीटबाट पनि वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको अनुमान गरिएको समाचारमा जनाइएको थियो । तर यस विषयमा अमेरिका र अफगानिस्तानका सरकारहरुले भने केही बताएका छैनन् । रासस